လိမ်မာရေးခွား ရှိတဲ့ သားသမီးေ လးတှကေို ပိုငျဆိုငျလို ပါသ လား ? – Nyi Ma Lay
လိမ်မာရေးခွား ရှိတဲ့ သားသမီးေ လးတှကေို ပိုငျဆိုငျလို ပါသ လား ?
တဈခြို့မိ ဘတှဟော သားသမီးတှကေို ပစ်စညျး ဥစ်စာအေ မှတှေ၊ ဂုဏျဒွပျတှေ အမှပေေးမယျ့အစား သူတို့ဘဝတဈလြှောကျလုံး အသုံးခလြို့ ရမယျ့ အသိတ ရားတှေ၊ လိမ်မာယဉျကြေး တဲ့အပွု အမူတှကေို အမှပေေးခငျြွ ကပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ အောကျ ဖကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ နညျးလမျးလေးေ တှနဲ့ ဆုံးမကွညျ့လိုကျပါ။ အဖိုးဖွတျလို့မရတဲ့ သားသမီး ရတနာလေးေ တှကို ပိုငျဆိုငျနိုငျ မှာ မလှဲပါပဲ။ နိုငျငံတကာ က မိဘ အတျောမြားမြား လိုကျနာကငျြ့သုံးနတေဲ့ နညျးဥပဒေ သလေးတှလေ ညျး ဖွဈပါတယျ။
၁။ သူတို့ ပူဆာသမြှကို မလိုအပျဘဲ အလှယျတကူ မဖွညျ့ဆညျးပါနဲ့။
ကျိုယျအတှကျ ဘာမှ အပ နျးမကွီးလို့ဆို ကလေးတှေ ပူဆာတိုငျး အလိုလိုကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနမေယျဆို သူတို့အရှယျေ ရာကျလာတဲ့ အခြိနျမှာ ဘာကိုမှ အလေးအနကျ ထားတ တျတော့မှာ မဟုတျေ တာ့ပါဘူး။ အရာအား လုံး လှယျလှယျရတယျပဲ ထငျပွီး ဘဝကိုေ ပါ့ပေါ့လေးပဲ ဖွတျသနျးသှား ကွပါလိမျ့မယျ။
ဘယျမိဘမှတော့ ကိုယျ့သားသမီး မကျြနှာညိုမသှား စခေငျြပါဘူး။ သို့ပမေယျ့လညျး (၃) ခါပူဆာရငျ (၁) ခါလောကျပဲ ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ အကွံပွုပါရစေ။
၂။ ကိုယျ့အပျေါကြေးဇူးပွုဖူးသူတှရေဲ့ ကြေးဇူးတရားကို အမွဲအောကျမသေ့တိရနအေောငျ လကေ့ငျြ့ပေးပါ။
ကိုယျ့အေ ပျါကြေးဇူးပွု ခဲ့ဖူးသူတှရေဲ့ ကြေးဇူးတ ရားကို သိတတျအောငျ ကိုယျတိုငျလညျး ကြေးဇူးရှငျတှကေို တလေးတ စားဆကျဆံ ဖို့လို အပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ယဉျကြေးတဲ့ အပွုအမူလေးတှေ၊ လကျဆှဲနှုတျဆကျတာမြိုးလေးတှေ၊ တဈယောကျကို တဈယောကျ မကျြလုံးအမူအရာေ လးတှနေဲ့ အသိအ မှတျပွုတာ မြိုးလေးတှေ ပွုလုပျတ တျအောငျ လကေ့ငျြ့ပေးပါ။
သူတို့အတုယူနိုငျအောငျ ကိုယျတိုငျလညျး လူတိုငျးအပျေါ ရငျးနီးနှေးထှေးစှာ ဆကျဆံပါ။ ကြေးဇူးတရားရဲ့ တနျဖိုးကို အမွဲ အောကျမနေ့ပေါ။
၃။ ပေးကမျးစှနျ့ကွဲတတျတဲ့ အကငျြ့လေးတှေ ကိနျးအောငျးနအေောငျ လကေ့ငျြ့ သငျကွားပေးပါ။
ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အရာေ လးတှေ မြှဝလှေူဒါနျး တဲ့အခါ ကလေးေ တှကို ပါဝငျ လှူဒါနျးစခွေငျးဖွငျ့ သူတို့ကိုလညျး ပေးကမျးခွငျးမှာ မှလြေ့ျောေ အာငျ လကြေ့ ငျ့ပေးပါ။ ဒီလို မကွာခဏလှူဒါနျးခွငျးက ကိုယျ့ဘဝကို ပိုပွီး ရောငျ့ရဲကနြေပျစသေလို ၊ အခွားမပွ ညျ့စုံတဲ့ သူတှအေတှကျ ကိုယျခငျြးစာ တတျတဲ့ စိတျေ လးတှေ ကိနျးအောငျးလာစနေိုငျပါတယျ။
၄။ သားသမီးတှကေို မလိုအပျဘဲ အလိုလိုကျတဲ့ မိဘမြိုးတှေ အနားမှာ မနပေါနဲ့။
မိမိပေါငျးသ ငျးတဲ့ အပေါငျး အသငျးတှကေလညျး သားသ မီးတှေ ကိုငျတှယျတဲ့ နရောမှာ အလေးအနကျထားတတျသူတှေ ဖွဈဖို့လိုအ ပျပါတယျ။ အကယျ၍ မိမိ ပတျဝနျးကငျြက မိဘတှေ ဟာ သားသမီးကိုငျတှယျတဲ့ နရောမှာ လြော့တိလြော့ရဲနဲ့ ဘာကိုမှ အလေး အနကျ မထားဘူးဆိုရငျတော့ ကလေးတှေ အတုယူမှားသှားနိုငျပါတယျ။
၅။ ကြေးဇူးတငျကွောငျးကို စာရှကျလေးပျေါမှာ ရေးပွီး အသိအမှတျပွုတတျအောငျ သငျကွားပေးပါ။
တိုးတကျ လာတဲ့ ခတျေနဲ့အညီ အခုခတျေကေ လးတှဟော အာရုံတှကေ မြားနတေတျတာကွောငျ့ တဈစုံတဈယောကျကို ကြေးဇူးတငျ တဲ့အခါ စာရှကျလေးေ ပျါရေးမှတျပွီး အသိအမှ တျပွုတတျတဲ့ အကငျြ့လေးတှေ ပွုလုပျပေးပါ။ ဒီနညျးလမျးဟာ သိပျကို ရိုးရှငျး လှပမေယျ့ ရရှေညျ သူတို့စိတျထဲမှာ ကြေးဇူး တရားဆိုတာ ဒီလိုအမွဲ အသိအမှတျပွုနရေမယျဆိုတဲ့ စိတျလေးေ တာ့ စှဲသှားမှာ မလှဲပါဘူး။
၆။ သူတို့နဲ့ ပတျသကျသမြှ ကိစ်စတှကေို ကိုယျ့ကခညျြးပဲ အမွဲ ဆောငျရှကျ မပေးပါနဲ့။
ကိုယျငယျ စဉျက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ဘဝအတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ ဘဝ အကွောငျးကို နားလညျအောငျ သငျကွားပေးပါ။ တဈခုခုဆို သူတို့ဘာသာ ရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးခှ ငျ့ပေးလိုကျပါ။
ကိုယျက ခညျြးပဲ နရောတကာ လိုကျကာကှယျပေးမယျ ဆိုရငျတော့ သူတို့ဘဝ သူတို့ လြှော ကျလှမျးရမ ယျ့ အရှယျမှာ ဘာကိုမှ ဦးဆောငျနိုငျမှာ မဟုတျေ တာ့ပါဘူး။ ကရြှုံးမှုဆိုတာ အောငျမွငျမှုအတှကျ အားတဈခုပဲ ဆိုတာကို သိအောငျ သငျကွားပေးဖို့ပဲ လိုအပျတာပါ။
၇။ မလိုအပျဘဲ အပိုကိစ်စတှကေို အလိုမလိုကျပါနဲ့။
ကလေးဆို တာတော့ ပူဆာလို့ရရငျ ပူဆာတတျ တာ သဘာဝပါ။ ကိုယျကလူကွီးဆိုတော့ စဉျးစားဆငျခွငျဉာဏျရှိတယျ။ တကယျ လိုအပျ နတေယျဆိုမှ ဖွညျ့ဆညျးပေးပါ။ မဟုတျရငျတော့ ကွီးလာတဲ့ အခါ အရေးမကွီးတဲ့ အရာတှအေတှကျ အသုံးအဖွု နျးကွီးတတျတဲ့ လူတဈေ ယာကျ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
၈။ အဖိုးအဖှားတှကေို လေးစားခဈြခငျတတျစဖေို့ ရှဆေ့ောငျလမျးပွပေးပါ။
ကိုယျတိုငျက လညျး မိဘတှကေို လေးစား တနျဖိုးထား တတျမှ ကိုယျ့သားသမီးတှေ အလှညျ့ကရြငျလညျး ကိုယျ့ကို ရိုသေေ လးစား တတျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အားလပျရ ကျတှမှော ကလေးေ တှနဲ့ အဖိုးအဖှားတှဆေီ သှားလညျပွီး ခွဆေုပျလကျနယျ ပွုစုတာမြိုးလေးတှေ ပွုလုပျပေးပါ။ အရုပျတှနေဲ့ ကစားနမေ ယျ့အစား မေ တ်တာငတျနတေဲ့ အဖိုးအဖှားတှနေဲ့ ရငျးနှီး နှေးထှေးစှာ နထေိုငျဖို့ အခြိနျပေးလိုကျပါ။
၉။ ငှကေို တနျဖိုးထားတတျအောငျ သငျကွားပေးပါ။
ငှကွေေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ငှကေို ဘယျလို စီမံသုံးစှဲရတယျ၊ ပိုတဲ့ငှကေို ဘယျလို စုဆောငျးရမယျ။ တဈခြို့တဈဝကျကိုတော့ မရှိဆငျးရဲ သားတှအေတှကျ လို အပျသလို လှူဒါနျးပေး ရတယျဆို တာမြိုးလေးတှေ အသကျအရှယျကွီးသှားတဲ့ အထိ အလအေ့ကြ ငျ့ရသှားအောငျ သငျကွားပေးပါ။
၁၀။ ကိုယျဖွတျသနျး လာတဲ့ ဘဝအတှအေ့ ကွုံတှနေဲ့ ဗဟုသုတတှေ မြှဝပေေးပါ။
သငျဟာ ကွှယျဝခမျြး သာတဲ့ မိသားစုက ပေါကျဖှားလာ တဲ့သူဆိုလညျး သငျ့မိဘတှေ လကျထကျက စီးပှားရေးတှေ ဘယျလိုလု ပျဆောငျခဲ့တ ယျ၊ အကယျ၍ ခြို့တဲ့ တဲ့ ဘဝက ဆငျးသကျ လာတဲ့ သူဆိုလညျး လောကဓံရဲ့ အထိုးအနှကျတှကေို ဘယျလိုရုနျး ကနျခဲ့ရတယျ ဆိုတာတှကေို မြှေ ဝပေးလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ သူတို့လေးတှေ ဘဝအပျေါထားတဲ့ ခံယူခကျြတှေ တဖွညျးဖွညျး ရငျ့ကကျြ တညျငွိမျလာပါလိမျ့မယျ။
၁၁။ ကိုယျ့ဘဝအတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး ဘဝအကွောငျး ကောငျးကောငျးနားလညျ သဘောပေါကျအောငျသငျကွားပေးပါ။
အကယျ ၍သငျ့မှာ လိုခငျြတာမရတိုငျး ဂဈြတို ကျတတျတဲ့ ကလေးတဈယောကျရှိနပွေီ ဆိုရငျတော့ ပထမဆုံး အပွဈတငျ ရမယျ့သူက သငျကိုယျတို ငျပဲ ဖွဈပါ လိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး စိတျမပကျြပါနဲ့ ။
အကယျ၍ အရမျးကွီး ဆိုးရှားတာမြိုး မဟုတျခဲ့ဘူး ဆိုရငျတော့ အထကျေ ဖျာပွပါ နညျးလ မျးလေးတှသေုံးပွီး ပွုပွငျဆုံးမလို့ ရနိုငျပါသေးတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျေ တာ့ သားသမီးတှေ လညျး လိမ်မာရေးခွားရှိလာပွီး ဘာနဲ့မှ တနျဖိုးဖွတျလို့မရနိုငျတဲ့ အေးခမျြးသာ ယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျ ဆိုငျနိုငျမှာပါ။ Credit to orginal writer.
တစ်ချို့မိ ဘတွေဟာ သားသမီးတွေကို ပစ္စည်း ဥစ္စာအေ မွတွေ၊ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ အမွေပေးမယ့်အစား သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အသုံးချလို့ ရမယ့် အသိတ ရားတွေ၊ လိမ္မာယဉ်ကျေး တဲ့အပြု အမူတွေကို အမွေပေးချင်ြ ကပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ အောက် ဖက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးေ တွနဲ့ ဆုံးမကြည့်လိုက်ပါ။ အဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ သားသမီး ရတနာလေးေ တွကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် မှာ မလွဲပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ က မိဘ အတော်များများ လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ နည်းဥပဒေ သလေးတွေလ ည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သူတို့ ပူဆာသမျှကို မလိုအပ်ဘဲ အလွယ်တကူ မဖြည့်ဆည်းပါနဲ့။
ကိုယ်အတွက် ဘာမှ အပ န်းမကြီးလို့ဆို ကလေးတွေ ပူဆာတိုင်း အလိုလိုက် ဖြည့်ဆည်းပေးနေမယ်ဆို သူတို့အရွယ်ေ ရာက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဘာကိုမှ အလေးအနက် ထားတ တ်တော့မှာ မဟုတ်ေ တာ့ပါဘူး။ အရာအား လုံး လွယ်လွယ်ရတယ်ပဲ ထင်ပြီး ဘဝကိုေ ပါ့ပေါ့လေးပဲ ဖြတ်သန်းသွား ကြပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်မိဘမှတော့ ကိုယ့်သားသမီး မျက်နှာညိုမသွား စေချင်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း (၃) ခါပူဆာရင် (၁) ခါလောက်ပဲ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
၂။ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးပြုဖူးသူတွေရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို အမြဲအောက်မေ့သတိရနေအောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။
ကိုယ့်အေ ပ်ါကျေးဇူးပြု ခဲ့ဖူးသူတွေရဲ့ ကျေးဇူးတ ရားကို သိတတ်အောင် ကိုယ်တိုင်လည်း ကျေးဇူးရှင်တွေကို တလေးတ စားဆက်ဆံ ဖို့လို အပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယဉ်ကျေးတဲ့ အပြုအမူလေးတွေ၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုးလေးတွေ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်လုံးအမူအရာေ လးတွေနဲ့ အသိအ မှတ်ပြုတာ မျိုးလေးတွေ ပြုလုပ်တ တ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။
သူတို့အတုယူနိုင်အောင် ကိုယ်တိုင်လည်း လူတိုင်းအပေါ် ရင်းနီးနွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံပါ။ ကျေးဇူးတရားရဲ့ တန်ဖိုးကို အမြဲ အောက်မေ့နေပါ။
၃။ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေ ကိန်းအောင်းနေအောင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပါ။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရာေ လးတွေ မျှဝေလှူဒါန်း တဲ့အခါ ကလေးေ တွကို ပါဝင် လှူဒါန်းစေခြင်းဖြင့် သူတို့ကိုလည်း ပေးကမ်းခြင်းမှာ မွေ့လျော်ေ အာင် လေ့ကျ င့်ပေးပါ။ ဒီလို မကြာခဏလှူဒါန်းခြင်းက ကိုယ့်ဘဝကို ပိုပြီး ရောင့်ရဲကျေနပ်စေသလို ၊ အခြားမပြ ည့်စုံတဲ့ သူတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာ တတ်တဲ့ စိတ်ေ လးတွေ ကိန်းအောင်းလာစေနိုင်ပါတယ်။
၄။ သားသမီးတွေကို မလိုအပ်ဘဲ အလိုလိုက်တဲ့ မိဘမျိုးတွေ အနားမှာ မနေပါနဲ့။
မိမိပေါင်းသ င်းတဲ့ အပေါင်း အသင်းတွေကလည်း သားသ မီးတွေ ကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ အလေးအနက်ထားတတ်သူတွေ ဖြစ်ဖို့လိုအ ပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်က မိဘတွေ ဟာ သားသမီးကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ လျော့တိလျော့ရဲနဲ့
ဘာကိုမှ အလေး အနက် မထားဘူးဆိုရင်တော့ ကလေးတွေ အတုယူမှားသွားနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို စာရွက်လေးပေါ်မှာ ရေးပြီး အသိအမှတ်ပြုတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ။
တိုးတက် လာတဲ့ ခေတ်နဲ့အညီ အခုခေတ်ကေ လးတွေဟာ အာရုံတွေက များနေတတ်တာကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင် တဲ့အခါ စာရွက်လေးေ ပ်ါရေးမှတ်ပြီး အသိအမှ တ်ပြုတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သိပ်ကို ရိုးရှင်း လှပေမယ့် ရေရှည် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ကျေးဇူး တရားဆိုတာ ဒီလိုအမြဲ အသိအမှတ်ပြုနေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးေ တာ့ စွဲသွားမှာ မလွဲပါဘူး။
၆။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်သမျှ ကိစ္စတွေကို ကိုယ့်ကချည်းပဲ အမြဲ ဆောင်ရွက် မပေးပါနဲ့။
ကိုယ်ငယ် စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဘဝ အကြောင်းကို နားလည်အောင် သင်ကြားပေးပါ။ တစ်ခုခုဆို သူတို့ဘာသာ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းခွ င့်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုယ်က ချည်းပဲ နေရာတကာ လိုက်ကာကွယ်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ဘဝ သူတို့ လျှော က်လှမ်းရမ ယ့် အရွယ်မှာ ဘာကိုမှ ဦးဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ေ တာ့ပါဘူး။ ကျရှုံးမှုဆိုတာ အောင်မြင်မှုအတွက် အားတစ်ခုပဲ ဆိုတာကို သိအောင် သင်ကြားပေးဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။
၇။ မလိုအပ်ဘဲ အပိုကိစ္စတွေကို အလိုမလိုက်ပါနဲ့။
ကလေးဆို တာတော့ ပူဆာလို့ရရင် ပူဆာတတ် တာ သဘာဝပါ။ ကိုယ်ကလူကြီးဆိုတော့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတယ်။ တကယ် လိုအပ် နေတယ်ဆိုမှ ဖြည့်ဆည်းပေးပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ကြီးလာတဲ့ အခါ အရေးမကြီးတဲ့ အရာတွေအတွက် အသုံးအဖြု န်းကြီးတတ်တဲ့ လူတစ်ေ ယာက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၈။ အဖိုးအဖွားတွေကို လေးစားချစ်ခင်တတ်စေဖို့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေးပါ။
ကိုယ်တိုင်က လည်း မိဘတွေကို လေးစား တန်ဖိုးထား တတ်မှ ကိုယ့်သားသမီးတွေ အလှည့်ကျရင်လည်း ကိုယ့်ကို ရိုသေေ လးစား တတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလပ်ရ က်တွေမှာ ကလေးေ တွနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေဆီ သွားလည်ပြီး ခြေဆုပ်လက်နယ် ပြုစုတာမျိုးလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးပါ။ အရုပ်တွေနဲ့ ကစားနေမ ယ့်အစား မေ တ္တာငတ်နေတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ ရင်းနှီး နွေးထွေးစွာ နေထိုင်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။
၉။ ငွေကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ။
ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငွေကို ဘယ်လို စီမံသုံးစွဲရတယ်၊ ပိုတဲ့ငွေကို ဘယ်လို စုဆောင်းရမယ်။ တစ်ချို့တစ်ဝက်ကိုတော့ မရှိဆင်းရဲ သားတွေအတွက် လို အပ်သလို လှူဒါန်းပေး ရတယ်ဆို တာမျိုးလေးတွေ အသက်အရွယ်ကြီးသွားတဲ့ အထိ အလေ့အကျ င့်ရသွားအောင် သင်ကြားပေးပါ။
၁၀။ ကိုယ်ဖြတ်သန်း လာတဲ့ ဘဝအတွေ့အ ကြုံတွေနဲ့ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးပါ။
သင်ဟာ ကြွယ်ဝချမ်း သာတဲ့ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာ တဲ့သူဆိုလည်း သင့်မိဘတွေ လက်ထက်က စီးပွားရေးတွေ ဘယ်လိုလု ပ်ဆောင်ခဲ့တ ယ်၊ အကယ်၍ ချို့တဲ့ တဲ့ ဘဝက ဆင်းသက် လာတဲ့ သူဆိုလည်း လောကဓံရဲ့ အထိုးအနှက်တွေကို ဘယ်လိုရုန်း ကန်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာတွေကို မျှေ ဝပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သူတို့လေးတွေ ဘဝအပေါ်ထားတဲ့ ခံယူချက်တွေ တဖြည်းဖြည်း ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ ကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဘဝအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်အောင်သင်ကြားပေးပါ။
အကယ် ၍သင့်မှာ လိုချင်တာမရတိုင်း ဂျစ်တို က်တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီ ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး အပြစ်တင် ရမယ့်သူက သင်ကိုယ်တို င်ပဲ ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ။
အကယ်၍ အရမ်းကြီး ဆိုးရွားတာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ အထက်ေ ဖ်ာပြပါ နည်းလ မ်းလေးတွေသုံးပြီး ပြုပြင်ဆုံးမလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်ေ တာ့ သားသမီးတွေ လည်း လိမ္မာရေးခြားရှိလာပြီး ဘာနဲ့မှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့ အေးချမ်းသာ ယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင် ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ Credit to orginal writer.
Previous post တက်ကသိုလျရိပျသာလမျးက ခွံအမှတျ ၅၄ ရဲ့ မူလပိုငျရှငျမိသားစု
Next post လူသာမာနျဘဝနဲ့ ဖွတျသနျးနထေိုငျနတေဲ့ ကုနျးဘောငျခတျေ နောကျဆုံးမငျးဆကျ ဖွဈခဲ့တဲ့ သီပေါမငျး၏ တီတျော